Download: Ntughari nke zuru oke na nke zuru ezu banyere ihe omuma (ABX) | Martech Zone
Demandbase na-agbanwe ụzọ ụlọ ọrụ B2B si aga ahịa. Demandbase Otu bụ ụlọ zuru ezu zuru oke nke ngwọta B2B na-aga ahịa, na-ejikọ ahụmịhe na-eduga na akaụntụ, mgbasa ozi, ọgụgụ isi ahịa, na ngwọta data B2B ka ndị otu Marketing na Ahịa na nnukwu ụlọ ọrụ na-eto ngwa ngwa nwere ike ịmekọrịta ngwa ngwa, kesaa ọgụgụ isi, ma nwee uto mgbawa.
Chief Marketing Officer, Jon Miller, edeela ma bipụta ọmarịcha akwụkwọ ọhụụ ọhụụ na mgbanwe nke Ahịa Na-Dabere Ahịa (ABM) ... Akaụntụ Dabere na Ahụmahụ (ABX).
Gịnị bụ Akaụntụ Dabere na Ahụmahụ (ABX)?
Ọ bụ ihe dị mkpa, na-echebara ndị ahịa echiche nke ịga ahịa - nke na-agwakọta itinye aka na ahịa ahịa inbound na nkenke na ịchekwa Ahịa Ahịa. ABX na-akwalite akụkụ ọ bụla nke ahụmịhe ahụ na-azụ ahịa na ndụ ndụ B2B niile ma na-akọwapụta simplistic ABM na usoro ọdịnala dị mfe. ABX bụ ezigbo mgbanwe nke Ahịa sitere na Akaụntụ.
Bzụ ahịa B2B nke oge a bụ maka ịkwalite akụkụ ọ bụla nke ahụmịhe onye zụrụ ahịa, na ndụ ndụ B2B niile, yana ịme simplistic ABM na ịchọ ọdịnala ọdịnala. Oge eruola maka ngbanwe ọzọ na B2B atụmatụ azịza maka ahịa. Anyị enweghị ike ịnọgide na-eme otu ihe ma na-atụ anya nsonaazụ dị iche.
Ọ dabara nke ọma, ụdị ọhụụ, usoro ọhụụ, na teknụzụ ọhụụ - nke AI na nnukwu data na - ebugharị iji gosipụta ụzọ dị mma maka ụlọ ọrụ B2B ọ bụla: Ahụmịhe Akaụntụ. Nke a bụ onye ọrụ gị, ntuziaka zuru ezu iji tinye oghere ndị ahịa na azụmaahịa na akaụntụ B2B na-aga ahịa ahịa. Gụnyere na ntuziaka:
Gịnị kpatara Ahụmahụ Ji Dabere na Akaụntụ?
Usoro 5 ABX
Mee ntọala data akaụntụ gị
Chọta akụkọ dị mkpa
Tinye aka (Ghọta, hazie, kpọsaanụ, soro ndị mmadụ na-akpakọrịta)
Mechie ohere site na ịhazi ahịa na ọrịre
Tụọ ọganihu akaụntụ
The ebook gụnyekwara ozi banyere iwulite otu kpakpando ABM gị, otu esi achọpụta ego, yana gụnyere ụfọdụ akwụkwọ ọrụ iji bido.
Download Clear & Complete Guide To Account-Dabere Ahụmahụ (ABX)
Tags: abmabm mgbasa oziabm mmefu egoabm ebookabm akammejuputa abmabm orchestrationabm azumAbxnjem akaụntụahụmahụ dabeere na akaụntụahia di na akaụntụainnukwu dataisi-aladownloadebookitinye akafree download
Salonist Spa na Salon Management Platform: Oge akara aka, Ndepụta Ngwaahịa, Ahịa, Nkwụ ụgwọ, na ndị ọzọ